China Custom mkpọchi uwe Foldable Non kpara Foldable Ekike Clothing Cover Bag Black Polypropylene Non kpara Garment Bag N'ogbe Manufacturer and Supplier | Zhihongda
Omenala mkpọchi uwe foldable Non kpara foldable Ezu Clothing Cover Bag Black Polypropylene Non kpara Garment Bag N'ogbe
Ihe eji eme ihe: A na-eme akpa ndị a nke nchekwa gburugburu ebe obibi Na-enweghị akwa nwere akwa na-eguzogide ọgwụ, mmiri na-eguzogide ọgwụ, dị nro, na iku ume. Ewubere ya ka ogide ma kwe gi nkwa ichebe uwe gi n’oge nile.
Chebe Megide ustjá: Akpa uwe ndị a na-eku ume ma chekwaa uwe dị ka uwe ajị anụ na jaket akpụkpọ anụ na-echedo ma chekwaa. Gbochie mmetọ ndị a na-ahụkarị dịka uzuzu, ntutu anụ ụlọ, ọkụ ọkụ, iru mmiri, mmiri ma ọ bụ ebu iji mebie uwe.
1. Ihe Kachasị Ebube: A na-eji akpa ndị a na-echebe gburugburu ebe obibi Ejiri akwa na-enweghị akwa nwere akwa na-eguzogide ọgwụ, mmiri na-eguzogide ọgwụ, dị nro, na iku ume. Ewubere ya ka ogide ma kwe gi nkwa ichebe uwe gi n’oge nile.
2.Protect Against Dust: Akpa uwe ndị a na-eku ume ma debe uwe dị ka uwe aji na jaket akpụkpọ anụ na-echebe ma na-echekwa. Na-egbochi mmetọ ndị na-ahụkarị dị ka uzuzu, ntutu anụ ụlọ, ọkụ ọkụ, iru mmiri, mmiri ma ọ bụ ebu site na uwe na-emebi.
3. Clear Window: The uwe akpa maka nchekwa na a nnukwu uzo window, ị nwere ike mfe ịhụ n'ime uwe na-enweghị na-emeghe uwe akpa.durable na-eji ire ụtọ mkpọchi uwe The akpa akpa maka nchekwa nke na Nchikota na sturdy full-ogologo zipa ekwe ka ị iji chekwaa uwe elu na uwe gị n'ụzọ dị nchebe ma nwekwaa nchebe.
4.Value Pack: Ahaziri size, ọ bụ oké maka azụmahịa suut, Chiefs, ogologo Uwe, sweaters, Jaketị, gowns, trouzas, n'elu, t-uwe elu, uwe agbamakwụkwọ, egwuregwu mkpuchi, ogologo oyi uwe, s, wdg. maka nchekwa nchekwa, na-eme ka ime ụlọ gị dị mma ma hazie ya na agba. Dabara uwe nwoke na nwanyi.
5. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla n'oge eji, biko kpọtụrụ anyị
ihe Omenala mkpọchi uwe foldable Non kpara foldable Ezu Clothing Cover Bag Polypropylene Non kpara Garment Bag N'ogbe
Ihe onwunwe 80gsm na-abụghị akpa, ma ọ bụ ahaziri
Mbipụta silk ihuenyo. okpomọkụ nyefe, submilation, gravure wdg
Aka na-abụghị kpara, ma ọ bụ ahaziri
Mbukota 10pcs / opp akpa, 100pcs / katọn
Ojiji akpa akpa, Nkwalite akpa, nkwakọ akpa, onyinye akpa
Njirimara & uru AZO n'efu, REACH, ROHS gafere
Nkwado ihe maka ika
Green, ngwaahịa eco-friendly
Dị iche iche ngwaahia ịke
Oge nlele Daysbọchị 3-5
Oge mmepụta 15-25days mgbe iji nkwado
Nyefe ụgbọ mmiri Ningbo, ma ọ bụ dị ka kwa ahịa chọrọ
Kwụ ụgwọ okwu Nkwụnye ego 30%, ego ga - akwụ ụgwọ B / L
Kwụ ụgwọ ụzọ T / T /, ahia ahia, westem union, gram ego, paypal, cash, L / C.
Ngwaahia A nabatara OEM & ODM
More Product (Style Nhọrọ)
Nke gara aga: White uwe akpa nwoke uwe cover akpa, foldable uwe akpa maka uwe
Osote: factory price NO MOQ uwe akpa na akpa, ahaziri uwe bag uwe agbamakwụkwọ akpa
Foldable Non kpara uwe akpa
Foldable Ekike Clothing Cover Bag
Uwe uwe mkpuchi
abụghị kpara uwe akpa
abụghị kpara uwe akpa N'ogbe
Polypropylene Non kpara uwe akpa
Mkpọchi uwe foldable Non kpara uwe akpa
zipa uwe akpa
Bolsa de pelo Omenala Silk Hair Packaging akpa S ...
Omenala Nkwado Bipụta Eco Enyi na Enyi Onyinye Pack ...
2021 New Style China reusable Eco Nkwado B ...
factory tinyekwa maka China Promotion Inour Eur ...
N'ogbe Ewepụghị D Cut Eco Bag Non kpara D Cut S ...
Factory iyi China Expandable ịkpakọba Cotton ...